पूर्वमन्त्रीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने ओली समर्थकलाई कारबाही होस्: नेता नेपाल ! « MNTVONLINE.COM
पूर्वमन्त्रीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने ओली समर्थकलाई कारबाही होस्: नेता नेपाल !
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पूर्वमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको नाराबाजीको निन्दा गरेका छन् । शनिवार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले उक्त घटनाको निन्दा गरेका हुन् ।
ुपूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे आज राप्ती नगर पार्टीको बैठकमा सहभागी भई मन्तब्य राखिरहेको बेला अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका केही ब्यक्तिहरूले सुनुयोजित रूपमा गरेको अभद्र व्यवहार तथा नाराबाजीको निन्दा एवम् भर्त्सना गर्दछु, नेता नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चितवनको राप्ती नगर कमिटीको बैठकमा सहभागी भई नेता पाण्डेले मन्तव्य राखिरहेको बेला उनकै पार्टीकै कार्यकर्ताले होहल्ला र नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजीपछि प्रहरीले सुरक्षा दिएर नेता पाण्डेलाई कार्यक्रमस्थल बाहिर निकालेको थियो ।